हिरोको खेल लास्टमा भनेझै कतै आज फाईनलमा सन्दिप पो खेल्छन् कि ! यस्तो छ संम्भावना - NepalTrending
हिरोको खेल लास्टमा भनेझै कतै आज फाईनलमा सन्दिप पो खेल्छन् कि ! यस्तो छ संम्भावना
NepalTrending — November 10, 2020 add comment
एजेन्सी, २५ कार्तिक । युएईमा जारी १३ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी–ट्वान्टी क्रिकेटको उपाधिका लागि आज दिल्ली क्यापिटल्स र मुम्बई इण्डियन्स खेल्ने भएका छन् । यूएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा खेल बेलुका पौने आठ बजे सुरु हुने खेलमा साविक विजेता मुम्वई र पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको दिल्लीबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।
मुम्बईले पहिलो क्वालिफायरमा दिल्लीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुग्दा दिल्लीले भने दोस्रो क्वालिफायरमा सनराईजर्स हैदरावादलाई पराजित गर्दै मुम्बईसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो ।
उपाधि भिडन्तमा मुम्बई पाँचौं पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा हुँदा आईपीएलको इतिहासमै पहिलो पटक फाइनल पुगेको दिल्ली पनि उपाधि जित्ने मौका गुमाउने पक्षमा छैन् । जारी सिजनमा मुम्बईले १५ मध्ये १० म्याच जितेको थियो भने दिल्लीले खेलेका १६ मध्य ९ म्याच जित्न सफल भयो ।
दिल्लीमा नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने पनि आबद्ध छन्। तर, उनले यो सिजन मौका पाएका छैनन्। आजपनि उनले खेल्ने संम्भावना छैन । भारतिय मिडियाले पनि सन्दिपले आज पनि खेल्न नपाउने अनुमान गरेका छन् ।